AH: May 2012
Posted by AH at 5/31/2012 11:58:00 AM2comments
Posted by AH at 5/29/2012 10:31:00 PM 8 comments
ဟယ်ရီပေါ်တာကားလဲ ကြော်ငြာသမားတွေ လက်ထဲရောက်ရင် ဟော့ဒီလို ဖြစ်တော့ သကိုး
Posted by AH at 5/28/2012 08:58:00 PM6comments
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က Status လေးတွေက ရယ်စရာလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ Status တင်မကပဲ ကာတွန်းလေးတွေပါ ရောပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟဲ..ဟဲ စိတ်ချိုးနဲ့နော် အစ်ကိုနဲ့ အစ်မ .. ကြိုက်လွန်းလို့ တင်မိတာပါ။
Posted by AH at 5/27/2012 10:46:00 PM4comments
ကဲ.. ဒီနေ့ကတော့ တနင်္ဂနွေနေ့... ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ အိမ်မှာ အနားယူကြသူတွေ များကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အိမ်မှာ နားနားနေနေ နေချင်သူများ အပျင်းပြေစေဖို့ ဟောဒီ လေ့ကျင့်ခန်းပါတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အေရိုးဗစ်.. အဆီချ၊ အင်္ဂလိပ်စာသင် လေ့ကျင့်ခန်းလို့ပြောရမလားပဲ။ ပိုကောင်းတာက ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့် ထိုင်ခုံကနေထ သူတို့လို လက်နှစ်ဖက်ကို ကြက်တောင်ပံလိုလုပ်ပြီး ပျံ၊ သူတို့ပြောသမျှလိုက်ပြောလိုက်ရင်တော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု့လေး ဘာလေး ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ကဲ... ရယ်မော ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျား...
Posted by AH at 5/27/2012 08:44:00 AM2comments
Posted by AH at 5/26/2012 11:46:00 AM7comments
ကြောင် အကောင် ၅၅၀ မွေးလို့ မိန်းမကို ကွာရှင်းလိုက်တဲ့ ယောက်ျား
ကြောင်ချစ်သူများ ကြောင်ဘယ်နှစ်ကောင်အထိမွေးဖူးပါလဲ? အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာတော့ ဇနီးသည်ဖြစ်သူ ကြောင်ချစ်သူက အိမ်ကို ကြောင် အကောင် ၅၅၀ ၀ယ်လာပြီးမွေးလို့ မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ ငါ့ကိုရွေးမလား ကြောင်ကိုရွေးမလား ဆိုရာမှာတော့ ကြောင်ချစ်သူ ဇနီးက ကြောင်တွေကို ရွေးချယ်သွားပါသတဲ့။ ကွာရှင်းဖို့ လျှောက်လဲချက်မှာတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူဟာ အိပ်ယာပေါ်မှာလည်း အိပ်လို့မရရှာပါဘူး။ တစ်အိပ်ယာလုံးကြောင်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရေချိုးခန်းအ၀င်အ၀မှာလည်းကြောင်တွေ၊ အိမ်မှာလည်း ထမင်းချက်စားလို့ မရ၊ ထမင်းစားဖို့ စားပွဲခုံမှာထိုင်လိုက်ရင်လည်း သူ့ဟင်းတွေကို ကြောင်တွေကခိုးစား၊ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ကွာရှင်းဖို့ လုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလင်မယားဟာ ပြန်လည် သင့်မြတ်ဖို့အတွက် အကြံပေးအဖွဲ့နဲ့ ထပ်တွေ့ပေမယ့်လည်း ကြောင်ချစ်လှတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက သူ့ကြောင်တွေနဲ့ မခွဲနိုင်လေတာမို့ ခွဲခြင်းခွဲ ယောက်ျားကိုသာ ခွဲမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသတဲ့။
Posted by AH at 5/25/2012 12:25:00 PM 14 comments
ဟော့ဒီမှာတော့ စားစရာလေးတွေကို အမြင်လည်းလှ စားချင်စရာဖြစ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ ဘူးလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရွှေပြည်ပြန်ပြီး ဒါမျိုးလုပ်ရင် ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာ... အဲ.. Angry Bird ကတော့ မြန်မာပိုင်မှတ်ပုံတင်လိုက်လို့ ထမင်းဘူးထဲတောင် လုပ်ရောင်းလို့ ရမှာမဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တာပဲ။ ဟဲလို ကစ်တီတို့၊ မစ်ကီမောက်စ်တို့၊ ဒေါ်နယ်ဒတ်တို့ပါ မှတ်ပုံတင်လိုက်ရင် ဒုက္ခ။ တော်ကြာ ကိုယ်ကိုလာပြီး မူပိုင်ခွင့် တရားစွဲနေမှာစိုးလို့။ ကဲ.. အ၀သာ စားသွားကြပါ။
Posted by AH at 5/24/2012 10:04:00 PM6comments
Posted by AH at 5/24/2012 09:37:00 AM7comments
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ပီကင်းခေါ် ဘေဂျင်းမြို့တော်ကြီးမှာတော့ အများသုံးအိမ်သာများမှာ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းအသစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ “အများသုံး အိမ်သာထဲမှာ ယင်နှစ်ကောင်ထက်ပိုပြီးတော့ မရှိရ” ပါတဲ့။
မြို့တော် စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ရဲ့ ဘေဂျင်း စည်ပင်သာယာရေး ကော်မရှင် (BMCCAE – Beijing Municipal Commission of City Administration and Environment) က ပြီးခဲ့တဲ့ တင်္နလာနေ့မှာ စည်းကမ်းအသစ်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ မြေအောက်ရထား ဘူတာရုံတွေ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အသွားအလာများတဲ့နေရာတွေ၊ ဆေးရုံတွေ၊ ရှော့ပင်းမောတွေရဲ့ အများသုံးအိမ်သာများ သန့်ရှင်းရေးအတွက် ဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီ စည်းကမ်းတွေထဲမှာတော့ အများသုံးအိမ်သာတွေမှာ ယင်နှစ်ကောင်ထက် ပိုမရှိရ၊ အမှိုက် နှစ်စထက်ပိုမရှိရ၊ ရှိတဲ့အမှိုက်ကိုလည်း နာရီဝက်အတွင်း သိမ်းဆည်းရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အတိအကျ လိုက်နာဖို့ မလိုအပ်ပေမယ့် ဒါဟာ အများသုံးအိမ်သာတွေ သန့်ရှင်းစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ BMCCAE ရဲ့ ထိပ်တန်းအရာရှိတစ်ယောက်က ဘေဂျင်းညနေခင်းသတင်းစာမှာ ပြောသွားပါသတဲ့။
အင်း.. တစ်ခုခက်တာက ယင် ဘယ်နှစ်ကောင်ရှိသလဲကို ဘယ်သူတွေ အိမ်သာထဲသွားပြီး လိုက်ရေတွက်မလဲဆိုတာကိုပါ။
Posted by AH at 5/23/2012 11:28:00 PM4comments
Posted by AH at 5/22/2012 10:33:00 PM 10 comments
ဟိုရက်က အလုပ်ထဲက တောင်ကိုရီးယားတစ်ယောက်နဲ့ စကားစမြည်ပြောဖြစ်ပါသေးတယ်။ ပြောရင်းနဲ့ Plastic Surgery အကြောင်းစကားစပ်မိပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာတော့ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေး မျက်နှာကို အဓိကအားဖြင့် ခွဲစိတ်ကြကြောင်း၊ ဈေးလည်း အတော်ကြီးကြောင်း၊ များသောအားဖြင့် အထက်တန်းပြီးလို့ တက္ကသိုလ်မတက်ခင်အချိန်တွေမှာဆို ခွဲစိပ်မှု့ခံကြကြောင်း၊ ဈေးလည်း အမျိုးမျိုးရှိကြောင်း။ မျက်လုံးအတွက်တစ်ဈေး၊ နှာတံနဲ့ နှာခေါင်းအတွက်က တစ်ဈေး ကစလို့ မေးရိုးတွေဘာတွေပါ ပြင်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူ့မိန်းမလည်း ပလက်စတစ် ဆာဂျရီလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ ပလက်ဆာဂျရီ လုပ်တာကို မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့… ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ် သူက ချောပြီးသားဆိုတော့ လုပ်စရာမလိုဘူးတဲ့… ရယ်ရယ်မောမောပေါ့လေ။ နောက်ပြီးတော့ သူမွေးထားတာ သားနှစ်ယောက်ဖြစ်လို့ တော်တော်ကံကောင်းတယ်တဲ့။ ပလက်စတစ် ဆာဂျရီတွေဘာတွေ ထူးပြီး လုပ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့။ အဲ.. ပလက်စတစ် ဆာဂျရီလုပ်ရင်လည်း ဈေးကအမျိုးမျိုးရှိလေတော့ စိတ်ချရတဲ့နေရာမျိုးမှာ လုပ်မှကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် လှချင်လို့ လုပ်လိုက်မိပါတယ်... နောက်ဆုံး ပြင်လည်းပြီးရော မျက်နှာက မထော်မလန်း ပြင်မရပြုမရနဲ့ တစ်သက်လုံး ယူကျုံးမရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
တစ်ခုစဉ်းစားမိတာက ပလက်စတစ် ဆာဂျရီလုပ်လိုက်ရင် လှတစ်မျက်နှာ ယဉ်တစ်ကိုယ်လုံးဖြစ်သွားပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးရိုးဘီဇကို ပြောင်းလည်းလို့မရတာပါ။ ဒီတော့ သားသမီးတွေထွန်းကားလာတဲ့ အခါကျရင်တော့ ဟောဟို ဓာတ်ပုံထဲကို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ခေတ်ရေစီးကြောင်းက ပြောင်းလဲလာလေတော့ ပလက်စတစ် ဆာဂျရီတွေဘာတွေ လုပ်လာကြလေတော့ လုပ်ပါလို့လဲ မပြောလို၊ မလုပ်ပါနဲ့လို့လဲ မတိုက်တွန်းလိုပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ကိုယ် ပလက်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်ထားကြောင်းကိုတော့ အိမ်ထောင်ဖက်ကို ကြိုတင်ပြီးတော့ အသိပေးထားရင် ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မဟုတ်လို့ သား၊ သမီး ရတနာလေးတွေ ထွန်းကားလာတော့မှ ဟင် ဘယ်ကဟာကြီးလဲဆိုပြီး လင် မယားနှစ်ယောက် စကားများနေကြပါဦးမယ်။
Posted by AH at 5/21/2012 09:06:00 PM 13 comments
မြန်မာပြည်ကြီး တံခါးဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စက အတော့်ကို ကျွန်တော်တို့အာရုံကို ဖမ်းစားလှတယ်။ ဖမ်းစားတယ်ဆို ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ်မွေးဖွားကြီးပြင်တဲ့နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်ကို ပညာနို့ချို တိုက်ကျွေးတဲ့နိုင်ငံ၊ ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့နိုင်ငံ။ ဒီနိုင်ငံကြီး တိုးတက်တာကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မြင်ချင်လှသည်။ ဒီတော့ တံခါးတွေဖွင့်ရင် ဘာလုပ်ကြမဒုန်း။ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ လာကြတော့မည်လော။ လာကြသည်။ အတန်အသင့်လာကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသော Facility အပေါ်ကြည့်ကြသည်၊ Policy ပေါ်ကြည့်ကြသည်၊ Transparency ပွင့်လင်းမြင်သာမှု့ပေါ်ကြည့်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြန့်ကြာနေသည်။ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ “စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံ၍ အခြားစီးပွားရေး ကဏ္ဍများကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး” ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက် စာသားနေရာမှာ “စိုက်ပျိုးရေးကို ပိုမိုဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီး ခေတ်မီစက်မှု့နိုင်ငံထူထောင်ရေးနှင့် အခြားစီးပွားရေး ကဏ္ဍများကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး” ဆိုတဲ့ စာသားကို ပြောင်းလိုက်သည်။ စာသားကို အရမ်းကြိုက်ပါသည်။
သို့သော် “စိုက်ပျိုးရေးကို ပိုမိုဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီး”ဆိုတဲ့နေရာမှာ စိုက်ပျိုးရေးကို ဘယ်လို ပိုမိုဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မလည်းဆိုတဲ့ အချက်က အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဟိုနိုင်ငံ ဒီနိုင်ငံကလည်း စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု့တွေ တစ်စ တစ်စ လျှော့ချလာပြီဆိုတော့ အရင်လို ပို့ကုန်တွေကို ဈေးနှိမ်ပြီး သွင်းနေရတဲ့ နိုင်ငံတွေထက်စာရင် ခုပိုပြီးတော့ အခွင့်အလမ်းပိုမို များပြားလာပြီလို့ ထင်မိပါတယ်။ မှတ်မိပါရဲ့.... ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ စကားလက်ဆုံကျတုန်း သူပြောတာမှတ်မိသေးတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ တစ်နှစ်ထဲ လွတ်လပ်ရေးအတူရ၊ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို အုတ်မြစ်ချဖို့ ကြိုးပမ်းကြတဲ့အချိန်၊ ဦးနုနဲ့ အစ္စရေး ၀န်ကြီးချုပ်တို့ အတော် ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖြောင့်တုန်းက အစ္စရေး ၀န်ကြီးချုပ်ကြီးလာတော့ ပုဂံကို ရဟတ်ယဉ်နဲ့ လိုက်ပို့ပါသတဲ့။ လိုက်ပို့လေတော့ ရဟတ်ယဉ်ပေါ်ကနေ ပုဂံကို သွားမှာ ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို မြင်ရပါသတဲ့။ မြစ်လဲမြင်ရော အစ္စရေးသမ္မတ ဘာပြောကောင်းမလဲ ထိုင်ရာကထလို့ ဟာ ဟိုမှာ ဟိုမှာ မြစ်ကြီးလို့ အံသြတကြီး ပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာအဖွဲ့ကလဲ အင်းလေ အဲ့ဒါ ဧရာဝတီ မြစ်လေ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့… ဟင် မင်းတို့နိုင်ငံမှာ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ မြစ်ရှိသကိုး။ အစ္စရေးမှာသာ ဒီလိုမြစ်မျိုးရှိလို့ကတော့ အရှေ့အလည်ပိုင်း တစ်ခွင် တက်တက်စင်အောင် သိမ်းပြီးပြီလို့ ဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အစ္စရေးတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ရေချိုအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ ဂျော်ဒန်မြစ်ကို သေရေးရှင်ရေးတမျှ တန်ဖိုးထားပြီး ပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားသလို သဲကန္တာရထဲမှာ စိုက်ပျိုးရေးကို ထွန်းကားအောင် ကြံဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေလည်း နိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြစ်ဧရာကို အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားရမှာပါ။
Posted by AH at 5/21/2012 10:31:00 AM0comments
Posted by AH at 5/20/2012 10:05:00 PM7comments
ဒီနေ့ ၁၉ မေ ၂၀၁၂ စင်္ကာပူ သတင်းစာTHE STRAITS TIMES မှာ မြန်မာပြည်မှာ အဆင့်မြင့် အဆောက်အဦးဆောက်ဖို့အတွက် မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ စီမံကိန်းအတွက် အလုပ်ခေါ်စာလေးကို မြန်မာခေါင်းစီးနဲ့ တွေ့ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်။
ဆိုလေတော့ အဝေးမြေရောက် ရွှေမြန်မာတို့ ပြည်တော်ပြန်ဖို့ရာ မဝေးတော့ပြီလားလို့တောင် တွေးမိပါသေးတယ်။ ခက်တာက အဆင့်မြင့်အဆောက် အဦးစီမံကိန်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်က ဘယ်နေရာတွေမှာဖြင့် ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာ အဆင့်မြင့်အဆောက်အဦးတွေကို ဆောက်လုပ်မယ်။ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကျရင် ပြီစီးပြီးတော့ ဘယ်မြို့နယ်က ဘယ်ရပ်ကွက်တွေကိုဖြင့် အဆင့်မြှင့်မယ်၊ အဆိုပါ အဆင့်မြှင့်မယ့် စီမံကိန်းတွေကို ဘယ်ကုမ္ပဏီတွေကဖြင့် ဘယ်ရပ်ကွက်မှာ စီမံကိန်း ဘယ်နှစ်ခု၊ ဟိုကုမ္ပဏီကတော့ဖြင့် ဘယ်ရပ်ကွက်မှာ စီမံကိန်းဘယ်နှစ်ခု ဆိုတဲ စီမံကိန်းကို ပြည်သူတွေကို ချမပြလေတော့ ဟော တစ်ရုံ၊ ဟော နှစ်ရုံ ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်နဲ့ ဆောက်ချင်တဲ့လူက ထထပြီး ဆောက်နေလေတော့ ဖိတ်ခေါ်သော်လည်း ခပ်လန့်လန့်ရယ်ဖြစ်နေသလားလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။
အဲနောက်တစ်ခုတွေးမိတာက ဂရံကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ ခုချိန်ထိ အကုန်လုံးက အီရော အီရော လုပ်နေကြတော့ တစ်ချိန်ချိန် တင်းကျပ်လိုက်တာနဲ့ နှာခေါင်းသွေးတွေထွက်ပြီး အိမ်ဈေးကွက်က ကမောက်ကမ ထဖြစ်ဦးမယ်ထင်တာပါပဲ။ ကန်ထရိုက်တိုက်တွေမှာ ၀ယ်နေကြတယ်ဆိုပေမယ့် မြေပိုင်မှာသာ ဂရံရှိလေတာမို့ အဆင့်မြင့်တိုက်တွေ ဆောက်ပြီဆိုရင် ရှိရင်းစွဲတိုက်တွေမှာ နေပြီးသူတွေနဲ့ ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်း ဆက်ပြီး စခန်းသွားကြမယ် မသိ။ ၀ယ်ရောင်းစာချုပ်တွေကလည်း အိမ်ရှင်၊ အိမ်ငှားနှစ်ဦး သဘောတူပြီးရော Third Party အာမခံမျိုးလည်းမရှိ။ မြေပိုင်တွေကလည်း ဘိုးဘွားပိုင်လား၊ ဂရံလားဆိုတာကလည်း သေသေချာချာ မကွဲ၊ မဆလ ခေတ်တုန်းက ပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်တဲ့မြေတွေက ဂရံတွေဖြစ်တဲ့မြေကဖြစ်ကုန်၊ တစ်လမ်းထဲ ဘေးချင်ကပ်ရပ်တောင်မှ ဟိုဘက်မြေက ဘိုးဘွားပိုင်၊ ဒီဘက်မြေက ဂရံမြေဖြစ်လိုဖြစ်ဆိုတော့ ဒါလေးတွေကို စနစ်တစ်ကျလေးလုပ်ပေးရင်တော့ အိမ် နဲ့ မြေကို မြို့ကြီးတွေမှာ ၀ယ်ယူခြင်းသည် ခိုင်မာသော ရင်းနှီမြှပ်နှံမှု့လို့ သတ်မှတ်နိုင်မပေါ့လေ။ ခုများတော့ လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ဆိုတော့ ဘယ့်နှယ်ကိုလုပ်ရမှန်းမသိ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အနည်းဆုံးတော့ စင်္ကာပူသတင်းစာတွေမှာ မြန်မာခေါင်းစီးနဲ့ ကြော်ငြာတွေတွေ့လာရလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
Posted by AH at 5/19/2012 11:21:00 AM6comments
Posted by AH at 5/17/2012 06:20:00 PM6comments
Posted by AH at 5/16/2012 11:41:00 PM 8 comments